सेवा दिनेभन्दा लुट्ने धन्दामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु उद्यत | Citizen Post News
सेवा दिनेभन्दा लुट्ने धन्दामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु उद्यत
२०७५ माघ २५ गते ०९:२७
काठमाडौं । यतिखेर मुलुकभर रहेका विभिन्न उद्योगी तथा ब्यवसायी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले बढाएको चर्को ब्याजको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र त्यस मातहतका संघलगायतले चर्को अवैध ब्याज असुली रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक सक्रिय हुनुपर्ने र ब्यवसायीहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यतिखेर ब्यवसायीको पीडा विभिन्न नेता हुँदै संसदमा समेत प्रवेश पाइसकेको छ ।
तर, दुई तिहाई बहुमतको कम्यूनिष्ट सरकारले ब्यवसायीको पीडा नबुझेको या कानमा तेल हालेर सुतिरहेको हो ? भन्दै अधिकांश ब्यवसायीहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् । ब्यवसायीहरु संगठित हुँदै मुलुकभर आन्दोलन छेडिरहेका बेला त्यस्तै एक ब्यवसायीले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी, ठगी र अपारदर्शिताबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन् । ब्यवसायी अशोककुमार अग्रवालले प्रधानमन्त्रीलाई सम्वोधन गर्दै लेखिएको पत्र अर्थमन्त्री, उद्योग तथा बाणिज्यमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ, उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाईसमेत बोदार्थ पठाइएको छ ।
अहिले उद्योगी-ब्यवसायी किन आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो ? त्यस सम्वन्धमा उनले प्रष्ट पार्ने कोसिश गरेका छन् । ‘उद्योग बाणिज्य महासंघ र उद्योग ब्यापार सघंहरुले ठोस एजेण्डा तयार नगरी हावा र हचुवाको भरमा आन्दोलन नगर्न समेत अनुरोध गर्दछु’, उनले पत्रमा भनेका छन् । यदि त्यसो हो भने आखिर समस्या के हो ? कसरी बैंकले ब्याजदर घटाउन सक्छ ? सो बारेमा उनी भन्छन्, ‘प्रष्ट छ कि नेता, ब्यापारी तथा कर्मचारीहरुसँग नै पैसा छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणको डरका कारण पैसा बैंकमा नराखि घरमा थुपर्दा यो समस्या निम्तिएको हो ।’
ब्यवसायी अग्रवालका अनुसार यो समस्या आउनुमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघको गल्तीको पनि त्यतिकै गल्ती छ । किनकी निक्षेपमा दिने ब्याजको सहमति नभई कर्जामा लिने ब्याजको सहमति हुन जरुरी थियो । जसले गर्दा ब्याज नबढाईकन निक्षेपमा दिने ब्याजतर्फ सोचिन्थ्यो तर त्यसको ठिक विपरित भयो । उनका अनुसार बैंकहरुले ब्याज बढाउँदैमा विदेशबाट पैसा आउने र बैंकले ब्याजदर घटाउँदैमा पैसा विदेश जाने हुदैन् ।
बैकहरु नाफामुखी बन्दा समस्याः
आजभोली बैकहरुले धमाधम शाखा विस्तार गरिरहेको खबर पढ्न र सुन्न पाइन्छ । के ति बैंकहरु साँच्चिकै सर्वसाधारण जनतालाई सेवा दिन विस्तार भएका हुन त ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । आजभोली सेवाका नाममा जनतालाई लुट्न बैंकहरु लालायित भएका देखिन्छन् । त्यसबारेमाम नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत हुनुपर्छ । बैंकहरुको काम जनतालाई सहजरुपमा ऋण दिने मात्र नभई ब्यवसाय मर्नबाट जोगाउन लगानी गर्नु पनि हो । तर आजभोली जसरी हुन्छ, पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्दै सामाजिक बदनाम गराउने, सूचना निकालेर जसरी हुन्छ सम्पत्ति हड्प्ने जस्ता काममा बैंकहरु निकै सक्रिय भएको कुरा कहीकतै लुक्न सकेको छैन ।
सुरुमा कागजात र आम्दानीको स्रोत बिना ऋण दिने र पछि ऋणीलाई सिध्याउने खेलमा योजनाबद्ध तरिकाले बैंकमा खेल रचिन्छ । पहिले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने र पछि डबल, त्रिपल ब्याज असुल्ने बैंकहरुको धन्दा निकै फस्टाएको छ । के जनतालाई सेवा दिने नाममा खोलिएका बैंकहरुको काम यिनै हुन् ? ब्यवसायी अग्रवालको प्रश्न छ । त्यसो त, अर्को बैकमा जाँदा घरजग्गाको मुल्याङ्गन, मालपोतमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, सेवा शुल्क र बंैक छाड्दा जबरजस्ती लिने जरिवानाको कारणले गर्दा बैकहरुले आफुखुसी ब्याज लिने गरेको अधिकांश ब्यवसायीहरुको भनाई छ ।
ब्यवसायी अग्रवालले लेखेको पत्र जस्ताको तस्तै प्रस्तुतः